ကျန်းမာရေး | အောက်တိုဘာလ 2021
အဖြေတိုတောင်းသည်မှာဟုတ်သည်၊ ခွေးများသည်ပန်းဂေါ်ဖီကိုစားနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုအရာထက်ထိုအရာသည်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာလူသားများနည်းတူခွေးများသည်နေ့စဉ်အာဟာရရရှိသည်
အဲ့ဒီခွေးကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကမင်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်နေတယ်။ သစ္စာရှိသူငယ်ချင်းကသင်စားသောပုစွန်အချို့ကိုလိုချင်သည်ကိုသင်သိသည်။ ကျနော်တို့သိသင့်သလောက်
ဖီဒို၏လူသားသူငယ်ချင်းများသည်ဖရဲသီးစားရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ သို့သော်သင်၏ခွေးဖရဲသီးကိုကျွေးမွေးရန်ဘေးကင်းပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဖရဲသီးတိုသည်သင့်ခွေးစားရန်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ အထူးသဖြင့်
ခွေးများသည်သူတို့၏ခွေးမိဘများကိုပြုံးကြသလား။ အဲဒါကခွေးတစ်ကောင်နဲ့တူလား။ ဒါမှမဟုတ်ဒဏ္aာရီတစ်ခုလား။ သငျသညျအလုပျမှာရှည်လျားစိတ်အားသန်သောနေ့ကရှိခဲ့ပါပြီ။ မင်းကအတူတူပဲမောင်းတယ်၊
သင့်ခွေးမှာဖျားနာနေသလား။5ရိုးရှင်းသောအကြောင်းရင်းများ & ကုသမှု
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့နားရွက်ကနည်းနည်းနွေးနေတယ်၊ ​​သူ့နှာခေါင်းကလည်းနည်းနည်းခြောက်သွေ့နေတယ်။ အဖျားတက်နိုင်မလား? ခွေးမှာအဖျားရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ ဒီမှာ
ခွေးကြီးထွားခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ဖမ်းခြင်း - သင်သိသင့်သည့်အရာ
ခွေးတစ်ကောင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆူညံသံကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ခွေးသည်အော့အန်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းဘာမှမထွက်လာ တစ်ခါတစ်ရံခွေးများသည်သူတို့ကြိုးစားသည့်အတိုင်းပြန်ဖမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးနိုင်သည်
ဒါဟာငါတို့ရဲ့သစ္စာရှိသူသူငယ်ချင်းတွေ၊ ကြမ်းပြင်မှာဒါမှမဟုတ်သူတို့အိပ်ရာပေါ်မှာလဲနေတာ၊ သူတို့ယက်ကိုလျက်နေတာလား၊ ခွေးတွေကဘာလို့လျက်နေကြတာလဲ
ခွေးနှာချေခြင်း။ ခွေးများနှာချေခြင်းအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းသင်မသိသောအရာ (၇) ခု
ခွေးများသည်အဘယ်ကြောင့် Wag၊ ဝါးခြင်း၊
ခွေးပိုင်ရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ခြေထောက်တစ်ဖက်သို့မဟုတ်မျက်နှာ၌လှုပ်ခါနေသောအမြီးအားဖြင့်တစ်ခါမျှမရိုက်ဖူးဟုသင်ဆိုလျှင်သင်လိမ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒါကြောင့်ရှည်လျားသောဆံပင်ခဲ့လျှင်
အိမ်လုပ်ခွေးခေါင်းလျှော်ရည် - ခွေးထိန်းသူမှ DIY ချက်ပြုတ်နည်းများ
သင်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ရင်းခွေးခေါင်းလျှော်ရည်ကိုပြသသည့်အခါ - အထိခိုက်မခံနိုင်သောခွေးအရေပြားအတွက်ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ညစ်ပတ်ခွေးများအတွက်အော်ဂဲနစ်ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်; မင်းဘယ်မှာလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်အသက် ၆ လအရွယ်ခန့်မှခွေးမတစ်ကောင်သည်သူမအပျိုဖော်ဝင်ချိန်ရောက်သောအခါ၎င်း၏ပထမဆုံးအပူသံသရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီအပူသံသရာစဉ်အတွင်း (ဆိုလိုသညျ
ဆုတ်ဖြဲခြင်း၊ ဆုတ်ဖြဲခြင်း၊ သင့်ခွေး၏သွားများသည်ထိရောက်သောအစာကြေမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းအရေးကြီးသောအသုံးပြုမှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုနည်း
အိပ်စက်ခြင်းသည်သင်၏ခွေးကလေးဘဝ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပြီးအစားအစာထက် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်၎င်းတို့မည်မျှလိုအပ်သနည်း။ သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသနည်း။ ခွင့်ပြုပါ
မင်းမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာခွေးကြိုးကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်။ သင်တစ် ဦး ကိုလမ်းလျှောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်
အကောင်းဆုံး Poodle ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ပုံစံများ (၁၉၅၀ မှယခုအထိ)
သမိုင်းကြောင်းအရ Poodles များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့၏သွေးကြောများကြောင့်စံပြအလုပ်လုပ်သော Poodles အားလုံးသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သက်သက်သာဖြစ်သည်
ခွေးပေါက်စကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန် - မည်သည့်အရာနှင့်ဘယ်အချိန်လဲ
ခွေးများအတွက်နနွင်း - အစာကျွေးခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သင်ဟာသင့်ခွေးကိုကျန်းမာစေမယ့်အစားထိုးနည်းလမ်းတွေရှာနေမယ်ဆိုရင်သေးငယ်ပေမဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နနွင်းအပင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏အဘို့အလူသိများတစ် ဦး အမွှေးအကြိုင်
Whelping Box - အကြံဥာဏ်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်တည်ဆောက်ပုံ
မာတိကာနှင့်လျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်ခြင်း Whelping သေတ္တာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း Whelping Box အစီအစဉ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များ Whelping Box တစ်ခု၏ဒီဇိုင်းWhelping Box အစီအစဉ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များ Whelping တစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ
2017 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ရှိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, အစားအစာ, တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဘော်ဒါနှင့်ဖြည့်စွက်အပေါ်အကြီးအကျယ် $ 69.5 ဘီလီယံအထိဒေါ်လာသုံးစွဲခဲ့သည်! ကျွန်တော်တို့ကိုခွေးပိုင်ရှင်တွေအားလုံး ti ကိုကြား
ဂျာမန်သိုးထိန်း rottweiler ရောစပ်ပုံများ
shih tzu နှင့်ရောထားသော poodle
အရုပ် poodle အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်